eNasha.com - प्रविधिले सिनेरुचि बढाउन सक्छ
नेपाली चलचित्रहरू स्तरीय नहुनुको कारणका रूपमा विशेषतः कमजोर प्रविधि र कथालाई दोष दिने गरिन्छ । भारतीय र पश्चिमा चलचित्रहरू उपलब्ध उच्चस्तरीय प्रविधिमा बन्दछन् तर उच्च प्रविधिमा निर्माण गरिएका भारतीय चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नेपाली चलचित्रहरू भने उपलब्ध सबैभन्दा कमजोर प्रविधिमा निर्माण भइरहेका छन् ।
अझैसम्म हाम्रा निर्माताहरू एक किसिमले लोपोन्मुख प्रविधि अर्थात् १६ एम.एम.मा खिचेपछि ३५ एम.एम.मा ठूलो पार्ने प्रविधि प्रयोग गरेर चलचित्र निर्माण गरिरहेका छन् । यसको परिणामस्वरूप हाम्रा चलचित्रहरू कमसल खालका बनिरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै कमजोरीलाई दृष्टिगत गरी हालैका दिनमा केही निर्माताहरू ३५ एम.एम.मै चलचित्र खिँचिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, उद्धव पौडेल र छवि ओझालाइ लिन सकिन्छ ।
हाम्रा निर्माताहरू साँच्चै नै सिनेमास्कोप चलचित्र बनाउँछन् भने हाम्रा दर्शकहरूले अहिलेको तुलनामा गुणस्तरीय चलचित्रको स्वाद चाख्न पाउनेछन् । त्यसो त सुरुका नेपाली चलचित्रहरू ३५ एम.एम.कै नेगेटिभमा खिचिएका थिए । उदाहरणका लागि आमा, परिवर्तन, मनको बाँध, हिजो आज भोलि, परालको आगोजस्ता चलचित्रहरूलाई लिन सकिन्छ । यी सबै चलचित्रहरू श्यामस्वेत थिए र सिनेमास्कोप थिएनन् ।
नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुमारीलगायत सिन्दूर, जीवनरेखाजस्ता सुरुसुरुका अन्य रङ्गीन चलचित्रहरू पनि ३५ एम.एम.कै नेगेटिभमा खिचिएका थिए तर सिनेमास्कोप भने थिएनन् । मुर्म्बई चलचित्र उद्योगमा काम गरिसकेका तुलसी घिमिरे र शम्भु प्रधानको नेपाली चलचित्रको प्रवेशसँगै १६ एम.एम.को नेगेटिभमा चलचित्र खिच्ने चलन पनि भित्रियो । यो नयाँ प्रविधि चलनमा रहेको ३५ एम.एम. मा खिच्ने प्रविधिभन्दा धेरै सस्तो पर्ने हुँदा धेरै लोकप्रिय भयो नेपाली निर्माताहरूमाझ । नेपाली निर्माताहरूको आर्थिक हैसियतलाई दृष्टिगत गरी केही स्थापित नेपाली निर्माता र कलाकारहरूले पनि १६ एम.एम.को नेगेटिभमा खिचेर ३५ एम.एम.मा ठूलो पार्ने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरेकाले एक किसिमले नेपाली निर्माताहरूले ३५ एम.एम.मा चलचित्र खिच्नै छाडे । परिणामस्वरूप हाम्रा चलचित्रको प्राविधिक पक्ष कमजोर भएर गयो ।
केही प्रादेशिक र कलात्मक चलचित्र बनाउन मात्र भारतीयहरूले यो प्रविधि अपनाएका थिए । बीचमा केही नेपाली चलचित्र ३५ एम.एम.को नेगेटिभमा खिचिए पनि तिनीहरू व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकेनन् । जस्तै, ज्वाला, दिदी आदि । धेरैपछि आएर २०४८ सालतिरमात्र नेपालमा एउटा सिनेमास्कोप चलचित्र बन्यो- राँको । करिब रु. एक करोड लगानी गरिएको भनिएको उक्त चलचित्र असफल मानियो । पछि अर्को सिनेमास्कोप चलचित्र माइली बन्यो, त्यसको हालत पनि राँकोभन्दा फरक भएन । रवि बरालको चमेली ३५ एम.एम.मा खिचिए पनि सिनेमास्कोप भने थिएन । ३५ एम.एम.मा खिचिएका सिनेमास्कोप चलचित्रहरूले १६ एम.एम.को नेगेटिभमा खिचिएका चलचित्रले जति पनि व्यापार गर्न नसकेपछि हच्किएका निर्माताहरूले १६ एम.एम.बाट नै सिधै सिनेमास्कोप बनाउने प्रयत्न गर्न थाले पनि सकिरहेका थिएनन् । अहिलेसम्म ३५ एम.एम.मा खिचिएका चलचित्रलाई मात्र सिनेमास्कोप प्रविधिमा ढाल्ने चलन रहिआएको छ । नेपाली छायाँकार राजुविक्रम थापाले हालसालै सुपर १६ एम.एम. नेगेटिभबाट नै सिनेमास्कोप चलचित्र बनाउनुभएको छ । थापाको प्रयत्न सफल भएमा यो प्रविधि नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि वरदान नै हुनेछ । थापाको प्रयोग बाला गुरुङद्वारा निर्मित निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको डर मा गरिएको छ । सम्बन्धित विषयमा उच्च अध्ययन गरेका सीमित नेपाली छायाँकारमध्ये थापा पनि एक हुनुहुन्छ । उहाँले नै छायाङ्कन गर्नुभएको एउटा कार्यशाला चलचित्रले मुर्म्बईमा छोटा चलचित्रको प्रतिस्पर्धामा पुरस्कार पाएको थियो । पुनेमा उहाँ पढ्न जानुहुँदा पढाउनुहुने हङ्गेरियन गुरु तथा प्रशिद्ध चलचित्र निर्माता स्टेभेन गेलले थापाको सीपलाई युरोपेली छायाँकारकै बराबरमा रहेको बताउनुभएको थियो । तीन वर्षको पढाइ सकेर नेपाल फर्केका थापाले निरन्तर छायाँकारको काम गरिरहनुभयो ।
नेपालमा बनाइएका धेरैजसो राम्रा चलचित्रहरू, जस्तै, वसन्ती, चमेली, दुःख, तकदिर, मनकामना, नुमाफुङ्गमा थापा नै छायाँकार रहनुभएको थियो तर उहाँ प्रेसको आँखामा कमै मात्र पर्नुभयो । उनै थापाले १६ एम.एम.बाटै सिनेमास्कोप चलचित्र बनाउनसक्ने प्रविधिको पहिचान गर्नुभएको छ । १६ एम.एम.को नेगेटिभमा खिचेर ३५ एम.एम.मा ठूलो पारेर बनाइएका चलचित्रभन्दा सुपर १६ मा खिचिएका र ३८ एम.एम.मा ठूलो पारिएका चलचित्र ४० प्रतिशत बढी राम्रा हुने दाबी थापाको छ । उहाँका अनुसार यो प्रविधि प्रचलित ३५ एम.एम.मा खिचेर सिनेमास्कोपमा लगिएका चलचित्रभन्दा धेरै सस्तो पर्छ । "सुपर १६ एम.एम.बाट सिनेमास्कोप बनाउँदा ३५ एम.एम.बाट बनाउँदाभन्दा २० लाख रुपियाँ कम लाग्छ" थापा भन्नुहुन्छ । सामान्य १६ एम.एम.को नेगेटिभभन्दा सुपर १६ एम.एम.को नेगेटिभमा बढी ठाउँ रहन्छ, जसका कारण ठूलो पार्दा पनि स्पष्ट दृश्य दिन्छ ।
जे होस्, हलिउडमा सेलुलोइड र डिजिटल चलचित्र निर्माणमा अत्याधुनिक रेड र टू के क्यामेरा प्रयोग भइरहँदा हामी नेपालीहरू प्रारम्भिक चरणकै प्रविधिमा सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ । थापाको डर ले राम्रो नतिजा ल्याएमा हामी कम्तीमा यथास्थितिबाट केही कदम अगाडि हुन्छौँ तर केही निर्माताहरू थापाको प्रयासलाई असम्भव भनिरहेका पनि छन् । "कहाँ १५ एम.एम.बाट सिनेमास्कोप बनाउन सकिन्छ ? यो त हावा कुरा भयो", निर्माता छवि ओझा र निर्देशक उज्जल घिमिरे दाबी गर्नुहुन्छ तर अर्का निर्माता आकाश अधिकारी भने "सकिन्छ" भन्नुहुन्छ । हेरौँ, के सत्य हुने हो !